उसिनेको अण्डा खाएपछि भुलेर पनि नखानुहोस् यी ४ चिज, निम्त्याउँछ हृद’यघा’तको ख’तरा ! – Online Khabar 24
उसिनेको अण्डा खाएपछि भुलेर पनि नखानुहोस् यी ४ चिज, निम्त्याउँछ हृद’यघा’तको ख’तरा !
पुरा खबर पढनु अघि माथि follow गर्दिनुस,
अण्डामा पाइने प्रोटिनहरूले तपाईंको शरीरलाई उर्जा दिन्छ, हड्डीहरूलाई सुदृढ पार्छ र आँखाको लागि पनि स्वस्थ हुन्छ।
भरपूर पौष्टिक तत्व समावेश गरेकै कारण अण्डालाई पौष्टिक आहारको श्रेणीमा राखिएको छ ।
कागती: कतिपय मानिस जो अण्डा खान मन पराउँछन्, उनीहरु अण्डामा कागतीको रस हालेर खान्छन् ताकी यसको स्वाद राम्रो होस्।तर कहिले पनि यस्तो गर्नु हुँदैन। किनभने त्यसो गर्दा रक्तनलीहरूलाई हानी हुन्छ र हृदयघातको खतरा पनि हुनसक्छ।
माछा : उसिनेको अण्डा खाएपछि कहिल्यै मासु वा माछा खानु हुँदैन, किनभने यदि तपाईं उसिनेको अण्डा खानुभयो भने तपाईंलाई छालासँग सम्बन्धित एलर्जीको हुनसक्छ। ज्ञान बिज्ञान डट नेट बाट साभार गरिरयको खबर
Prevश्रीमानले छोरी र श्रीमतीले छोरा हेर्ने भन्दै आमाबुबाले सन्तानको बाँडफाँड गरे कठै (भिडियो )
nextचुकन्दर साह्रै धेरैले हेपेको तर असाध्यै जडी फल हो, जान्नुस यसको चामत्कारीक फार्इदाहरू !